प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा किन आयो यस्तो झुट कुरा ? - Netizen Nepal
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा किन आयो यस्तो झुट कुरा ?
in कोरोना विशेष, गहन स्टोरी, मुख्य समचार, वर्गीकृत, समसामयिक, स्वास्थ्य, हाम्रो नेपाल
काठमाडौं , २० बैशाख। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना बिरुद्ध खोप लगाउनेमा नेपाल दक्षिण एशियामै भारतपछि पहिलो मुलुक भएको दाबी गर्नु भएको छ । यो कुरा उहाँले बैशाख १९ गते सोमवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा बताउनु भएको हो । उहाँले नेपालले हालल सम्म २१ लाख जनालाई पहिलो मात्राको कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको भन्दै नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो मुलुक भएको दाबी गर्नु भएको छ । तर के आधारमा नेपाल दोस्रो हो त ? त्यो भने खुलाउनु भएन ।
प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको तथ्य नमिल्ने आधारहरु यस्ता छन् । भारतले जनवरी १६ देखि कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान सुरु गर्यो । भारतले आफ्नो देशमा सुरु भएपछि त्यहाँको सेरम इन्स्टिच्युटमा तयार भएको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेको कोभिशिल्ड खोप पाकिस्तान बाहेक दक्षिण एसियाका देशहरु लाई पठायो । सोही खोपबाट यी देशहरुले खोप कार्यको शुरुवात गरेका हुन् ।
दक्षिण एसियाका देशहरुमध्ये भारतपछि नेपाल र बंगलादेशलेै २७ जनवरीमा एकै दिन खोप कार्य शुरु गरेका हुन्। नेपाललाई भारतले १० लाख मात्राको खोप निःशुल्क दिएको थियो। यहि खोपबाट नेपालले कोभिड बिरुद्धको खोप कार्यक्रम शुरु गरेको हो। श्रीलंकाले भने २९ जनवरीमा शुरु गरेको देखिन्छ । पाकिस्तानले भने चीनले दिएको खोपबाट फेब्रुअरी २ मा खोप अभियान सुरु गरेको हो। यसरी हेर्दा भारतपछि खोप अभियान सुरु गर्नेमा नेपाल र बंगलादेश हुन् न कि नेपाल मात्र ।
सन्खो २०२१ को शुरुवात भएको खोप कार्य दक्षिण एसियामा यस्तो देखिन्छ । भारत १६ जनवरी, बंगलादेश र नेपाल २७ जनवरी, भुटान २७ मार्च ,अफगानिस्तान २३ फेब्रुवरी, श्रीलंका २९ जनवरी र माल्दिभ्स १ फेब्रुवरी।
खोप लगाउनेको तथ्याङ्क का आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी सहि देखिदैन । उहाँको भनाइ अनुसार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी खोप लगाउनेमा भारतपछि नेपाल जस्तो लाग्छ । तर कूल खोप लगाउनेमा भारतपछि बंगलादेश अघि छ। जनसंख्याको अनुपातमा धेरै खोप लगाउनेमा दक्षिण एसियामै पहिलो भुटान छ भने दोस्रोमा भारत छ। खोप अभियान सुरु गर्ने दृष्टिले पनि भारतपछि नेपाल र बंगलादेशले एकै दिन जनवरी २७ मा खोप अभियान सुरु गरेका हुन्। यो हिसाबले भारतपछि नेपाल मात्र पहिलो नभएर नेपाल र बंगलादेश दुवै हुन्।
तथ्यहरुलाई हेर्दा अप्रिल २९ सम्मको तथ्याङ्कमा बंगलादेशमा ८६ लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसके। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेकै दिन सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा २० लाख ९१ हजार ५ सय ११ जनाले खोप लगाएको उल्लेख छ।यसरि खोप संख्यामको आधारमा नेपालको भन्दा बंगलादेशमा करिब ६५ लाखले बढीले खोप लगाएका छन् । त्यसैले दक्षिण एसियामा दोस्रोमा बंगलादेश देखिन्छ।
कूल जनसंख्याको अनुपातमा खोप लगाएका संख्यालाई हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वमै भुटान पहिलोमध्येमा पर्न आउँछ। करिव ८ लाख जनसंख्या भएको भुटानमा ६२ प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन्।
आवर वर्ल्ड इन डेटाले उल्लेख गरेको तथ्याङ्क अनुसार पनि दक्षिण एसियाका देशमा भुटान पहिलो, माल्दिभ्स दोस्रो, भारत तेस्रो र नेपाल चौथोमा देखिन्छ।
यसरी कुनै पनि आधारमा नेपाल कोभिड विरुद्धको खाप लगाउने कार्यमा दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो भनेर दाबी गर्न सकिने आधार भेटदैन । संकटको बेला तथ्य तोडेर राज्य प्रमुखले आफूलाई महान बनाउन खोज्नु भन्दा पनि काम गरेर देखाउँनु मानव हित र राज्यको दायित्व हो ।
केहि समय अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कोभिडका बिरामीको उपचार गर्नबाट सरकारले हात खडा गरेको देखि प्रधानन्त्रीले उद्घाटन र धार्मिक कार्यक्रममका नाममा आफैले जारि गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो। सरकारले कोभिड नियन्त्रण का लागि समेत उपयुक्त कदम चाल्न नसकेको बेला आफ्ना गल्तिहरुको ढाकछोपका लागि प्रधानमन्त्रीले यस्तो झुट कुरा बोलेको हुन सक्ने विभिन्न व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरेको छन् ।